I-CISPA ayifanga | Martech Zone
NgoLwesithathu, Meyi 1, 2013 NgoLwesibini, Aprili 30, 2013 Douglas Karr
Nanini na xa ubona umthetho osayilwayo usebenza kwi-Senate nakwiCongress engaphezulu kwesiqingatha sezigidigidi zeedola kwii-lobbyists zenkampani emva kwayo, kuya kufuneka ujonge kuyo njengommi. Njengoko kubhaliwe, i-CISPA ayizukusikhusela kwizisongelo ze-cyber, kodwa iya kwaphula ilungelo lethu lesiHlomelo lesi-4 kwimfihlo.
Ivumela urhulumente akuhlole ngaphandle kwemvume.
Yenza njalo kuwe Andikwazi nokufumanisa malunga nayo emva kwenyani.
Iyenza njalo iinkampani azinakho ukumangalelwa xa besenza izinto ezingekho mthethweni ngedatha yakho.
It ivumela iinkampani ukuba zihlasele i-cyber omnye nomnye nabantu abangaphandle komthetho.
Yenza yonke imigaqo-nkqubo yabucala kwiwebhu ukuba ibekho, kwaye iphula uhlengahlengiso lwesi-4.
Uhlengahlengiso lwesine kuMgaqo-siseko wase-United States
Ilungelo labantu lokukhuseleka ebantwini, ezindlwini, emaphepheni, nakwimiphumela, ngokuchasene nokugqogqwa okungafunekiyo kunye nokuhluthwa, ngekhe kwaphulwe, kwaye akukho Zigunyaziso ziya kukhupha, kodwa ngesizathu esinokubakho, sixhaswe yi-Oath okanye isiqinisekiso, kwaye ngakumbi sichaze indawo eza kugqogqwa, nabantu okanye izinto ezinokuthathwa.
Nceda uqhubeke Thatha inyathelo kwaye uchasane neCISPA.
tags: Uhlengahlengiso lwe4thcispasisekoukusebenzaisilungiso sesineilungelo lokuzimela ngasese